KU AKHRI Abkhaz Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Azerbaijani Baoule Bashkir Basque Batak (Toba) Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Cantonese) Chinese (Traditional) Chinese Cantonese (Simplified) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Georgian German German Sign Language Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hmong (White) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lari Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Russian Sign Language Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shiinaha (Shanghainese) Shiinaha (Sichuanese) Shiinaha Mandarin (Fudud) Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Soomaali Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zapotec (Quiatoni) Zulu
Maya, adduunka weligiis lama baabbiʼin doono, dabna laguma gubi doono oo wax kale lagu ma beddeli doono. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina baraa in Ilaahay dhulka u uumay in weligiis la dhex degganaado.
“Kuwa xaqa ahu dalkay dhaxli doonaan, oo weligoodna way dhex degganaan doonaan.”​—Sabuurradii 37:29.
Ilaahay baa “dhigay aasaaska dhulka, si aanu weligiis u dhaqdhaqaaqin.”​—Sabuurradii 104:5.
“Dhulku weligiisba wuu waaraa.”​—Wacdiyahii 1:4.
‘Ilaaha dhulka uumay, oo sameeyey, oo dhisay . . . si aan waxba tarayn uma uumin, laakiinse wuxuu u uumay in la degganaado.’​—Ishacyaah 45:18.
Binuʼaadanka dhulka ma baabbiʼin doonaan?
Ilaahay binuʼaadanka uma oggolaan doono inay dunida ku baabbiʼiyaan wasakh, dagaal ama wax kale. Weliba wuu ‘baabbiʼin doonaa kuwa dhulka baabbiʼiya’ (Muujintii 11:18) Sidee buu taas u fulin doonaa?
Dowladaha binuʼaadanka oo ilaa iyo hadda dunida dhawri waayay, Ilaahay wuxuu ku beddeli doonaa Boqortooyo kaamil ah oo samada ku taal. (Daanyeel 2:44; Matayos 6:9, 10) Boqortooyadaas waxaa hoggaamin doono Ciise Masiix. (Ishacyaah 9:6, 7) Ciise markuu dunida joogay awood mucjiso leh ayuu ku lahaa cimilada. (Markos 4:35-41) Ciise oo ah Boqorka Boqortooyada Ilaahay, wuxuu si buuxda u maammuli doonaa dhulka iyo waxa ku jira. Dib buu u cusbooneysiin doonaa xaaladaha dhulka, oo wuxuu ka dhigi doonaa kuwo la mid ah kuwii ka jiray beerta Ceeden.​—Matayos 19:28; Luukos 23:43.
Kitaabka soo ina ma baro in dhulka dab lagu gubi doono?
Maya, waxaas ina ma baro. Fekraddaas qaldan waxay badanaa ka timaaddaa fahan xumada aayadda 2 Butros 3:7 oo tiri: “Laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku eray baa dab loogu kaydiyey.” Bal eeg laba qodob oo muhim ah oo nagu caawin karo inaan fahamno erayadaas:
Kitaabka markuu isticmaalo kelmedaha “samooyinka,” “dhulka,” iyo “dab” wuxuu ka wadaa dhawr wax. Tusaale ahaan, aayadda Bilowgii 11:1 waxaa ku qoran “Dhulka oo dhammuna wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya.” Meeshan erayga “dhul” wuxuu ka dhigan yahay bulshada binuʼaadanka.
Aayadaha ku wareegsan 2 Butros 3:7 baa inoo tilmaamo micnaha samooyinka, dhulka iyo dabka. Aayadaha 5 iyo 6 waxay ina soo xusuusiyaan daadkii xilligii Nuux. Waqtigaas duni hore baa la halaagay, haddaba adduunkeenna ma uusan baabbiʼin. Hase yeeshee, daadkii wuxuu masaxay bulsho dulmi badan ama “dhul.” (Bilowgii 6:11) Wuxuu sidoo kale baabbiʼiyay nooc “samo” ah oo laga wado dadkii waqtigaas hoggaamin jiray bulshada dhulka. Marka, adduunkeenna lama halaagin oo waxaa la halaagay dadkii sharka lahaa. Nuux iyo reerkiisii way ka badbaadeen burburkii dunidaas oo daadkii kaddib waxay dhex noolaadeen dhulka.​—Bilowgii 8:15-18.
Sidii biyihii daadka, halaagga mise “dabka” laga sheegay 2 Butros 3:7 wuxuu baabbiʼin doonaa dunida dadka sharka badan, laakiin ma baabbiʼin doono adduunka. Ilaahay wuxuu ballanqaaday “samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay.” (2 Butros 3:13) ‘Samooyinka cusub’ oo ah hoggaaminta cusub ee Boqortooyada Ilaahay ayaa xukumi doonto “dhul cusub” mise bulsho cusub ee binuʼaadameed. Maammulka Boqortooyadaas dhexdeeda, dhulku wuxuu noqon doonaa janno nabad badan.​—Muujintii 21:1-4.
Kitaabka Quduuska ah Suʼaalaha Kitaabka oo Laga Jawaabay
Maxay tahay calaamadda “maalmaha ugu dambeeya”?
Kitaabka wuxuu ka hadlaa dhacdooyin iyo xaalado ka horrayn doono ‘dhammaadka wakhtiga dunida’
Wadaag Wadaag Dhulka Ma La Baabbiʼin Doonaa?
ijwbq qayb 141
Goormay Dunida Dhammaan Doontaa?
Dhul Nabad Badan, Ma Macquul Baa?